News - လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်ခြင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မေးခွန်း ၁။ ၀ တ်စုံကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်သနည်း လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်?
၁။ လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများအကြားအဝတ်အစားကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဂရုပြုသင့်သည်လှောင်အိမ်ဂဟေစက် ကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်ဝန်ထမ်းများ လှောင်အိမ်ဂဟေစက် လှည့်ပတ်စက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာလည်ပတ်ရန်၊ စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ စက်လည်ပတ်မှုပုံမှန်ပြုလုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းထိုပြlifeနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂဟေဆော်စက်၏လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေသည်။
၂။ လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါ။ အလွန်အကျွံတင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပါ။ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများအကြား ၀ တ်မှုတိုးစေရုံသာမကလှောင်အိမ်ဂဟေစက်၏ပျက်စီးမှုကိုလည်းအရှိန်မြင့်စေသည်။
3. operating သောအခါ လှောင်အိမ်ဂဟေစက်စက်၏သက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အလုပ်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
မေးခွန်း ၂။ လည်ပတ်နေစဉ်လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်သည့်စက်၏ပျက်ကွက်မှုကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း။
1. ပထမ ဦး စွာအပေါင်းတို့၏, ၏အော်ပရေတာ လှောင်အိမ်ဂဟေစက် ထုတ်လုပ်သူတွင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ရမည်။ လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရမည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေပေါ်ပေါက်လာသောအခါပြcageနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ ထိုဂဟေဆော်စက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
၂။ လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီကြိုတင်စစ်ဆင်ရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုလုပ်ပါ၊ ဘူတာတစ်ခုနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွင်ရှိမနေသေချာစစ်ဆေးပါ။
၃။ လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ဝန်ပိခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ Overload အလုပ်သည်အစိတ်အပိုင်းများကြားရှိ ၀ တ်ဆင်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေရုံသာမကလှောင်အိမ်ဂဟေဆော်ရာတွင်လည်းအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည်။
၄။ နေ့စဉ်အလုပ်တွင် လှောင်အိမ်ဂဟေစက် ထုတ်လုပ်သူများသည်လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်စက်ကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ပျက်ကွက်မှုဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှောင်အိမ်ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်သူကသင့်အတွက်စီစဉ်ပေးသောမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုပိုပြီးအကူအညီရောက်စေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဤဆောင်းပါးသည်သင်၏သံသယများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်စာပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမည်။ အချိန်မီသင်တုန့်ပြန်မည်၊ သင်၏ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သယ်ဆောင်သော့ခလောက်, ဦး သော့ခလောက်, ဖွဲ့စည်းပုံသော့ခလောက်, Hex သော့ခလောက်, ဒေါင်လိုက်ကွန်ကရစ်ပိုက်စက်, Lag Bolts,